Zvinoratidza: Kuteedzera kweVatengi neAkaita Anonzwisisa | Martech Zone
Zvinoratidza: Kuteedzera kweVatengi neAkaita Anonzwisisa
Chitatu, September 30, 2020 Chitatu, September 30, 2020 Jeremy Levy
Big data haichisiri chitsva mubhizinesi renyika. Mazhinji makambani anozvifunga sega seinotungamirwa nedata; tekinoroji vatungamiriri vanogadzira data rekuunganidza zvivakwa, vaongorori vanopepeta kuburikidza neiyo data, uye vashambadziri uye maneja vechigadzirwa vanoedza kudzidza kubva kune iyo data. Kunyangwe kuunganidza nekugadzirisa yakawanda data kupfuura nakare kose, makambani ari kushaya ruzivo rwakakosha nezve zvigadzirwa zvavo uye vatengi vavo nekuti havasi kushandisa maturusi akakodzera kutevera vashandisi parwendo rwese rwevatengi kana zvimwe ivo vari kuteedzera data uye nekuunza zvikanganiso mukuwongorora kwavo.
Zvichienderana nemusoro wenyaya, mubvunzo mumwe chete wakarongeka muSQL unogona kutora anopfuura awa kuti unyore uye uwanezve. Mibvunzo yeAd hoc inorwira kuburitsa inoitisa vatengi kuongorora nekuti mhinduro kumubvunzo wako wekutanga inogona kuva mumwe mubvunzo. Iwe unodzidza kuti kupfuura 50% yevatengi vanodzvanya pane yako CTA bhatani vanowana nzira yavo kuenda kune yekusaina-peji, asi isingasviki 30% yeavo vatengi inogadzira mushandisi chimiro. Zvino chii? Yasvika nguva yekunyora mumwe mubvunzo muSQL kuunganidza chimwe chidimbu chepuzzle. Kuongorora hakufanirwe kunge kuri nenzira iyi.
Inoratidza ndiyo inotungamira yeCustomer Analytics chikuva chinoita kuti zvigadzirwa nezvikwata zvemadhata zvifambe kupfuura panogumira maturusi eBI maturusi ekuita sarudzo nekunzwisisa maitiro evashandisi pane ese akabata. Chinongedzo chete chinobatana chakananga kune yako dura yekuchengetera, isingade kudzokororwa, uye inopa simba vashandisi vebhizinesi kupindura yakaoma mibvunzo yevatengi analytics mibvunzo pasina kuvimba nedata zvikwata kana SQL. Vagadziri vezvigadzirwa uye vashambadziri vanogona kumhanyisa mimwechete mibvunzo mumasekondi inotora vanoongorora dhata maawa kukodha. Anonzwisisika data ruzivo ari matatu madiki matanho kure.
Nhanho 1: Tsanangura Hwako Bhizinesi Zvinangwa Uye Metric
Kuti ugadzire inoshanda data modhi, iwe unofanirwa kutanga watsanangura rako bhizinesi zvinangwa uye shandisa kesi. Customer Analytics inoitirwa kutyaira sarudzo dzechigadzirwa uye chekushambadzira zvikwata, saka shanda kumashure kubva pamhedzisiro iwe yaunotarisira kuzadzikisa. Zvinangwa zvinofanirwa kuenderana nezvinangwa zvebhizinesi zvepakati. Zvinoratidza zvinogona kuyera maitiro evashandisi vese, vashandisi vega, uye zvese zviri pakati, saka zvakakosha kuteedzera zvinongedzo pamatanho akawanda. Tevere, sarudza mametric uye maKPI anogona kukuudza kana uri kubudirira. Mimwe mienzaniso yeiyi inogona kuve:
Wedzera mushanduro mutsva
Deredza kunyorera churn
Ziva ako anoshanda kwazvo ekushambadzira chiteshi
Tsvaga mapoinzi ekupesana mune yako yekuyenda kuyerera
Paunenge iwe wagadzika pane chinangwa, gadzira kunze mubvunzo waunotarisira kupindura neyako mushandisi data. Semuenzaniso, iti urikuvavarira kuwedzera kutorwa kwechinhu chitsva chechigadzirwa. Heino mimwe mienzaniso yemibvunzo iwe yaungade kupindurwa apo iwe uchiongorora yako yekushandisa yekuita fanera.
Vane premium vatengi vakagamuchira chigadzirwa nekukurumidza kupfuura vashandisi vemahara?
Zvinotora kangani kana zvidzitiro zvinotora kuti mushandisi asvike kuchigadzirwa chitsva?
Kugamuchirwa kutsva kunobatsira here mukuchengetwa kwevashandisi mukati meimwe chete chikamu? Pakati pezvikamu zvakawanda?
Wakashongedzerwa nemibvunzo iyi uye data kuti uzvipindure, unogona kuchera zviuru zvezviito zvevashandisi parwendo rwese rwevatengi. Gadzirira kuyedza yako hypotheses ine intuitive funnel visualizations.
Nhanho 2: Tevedza Rako Rwevatengi Rwendo Neiyo Multipath Mutengi Rwendo
Chinhu chepakati chinoratidza chimiro ndicho Multipath Vatengi Rwendo. Rwendo rwevatengi runoratidzwa seyakawandisa funnel, inoratidza kuyerera kwevashandisi kuburikidza nesarudzo dzakasiyana mukati mewebsite yako kana nharembozha. Kufungidzira rwendo kunobatsira zvigadzirwa uye zvekushambadzira zvikwata kufumura iwo chaiwo maitiro uye ekubata anotyaira vatengi kutenga, kuchengetedza, kana churn.
Kuparadzanisa fanera kunoenderera kubvumira timu yako kuti iwane iwo chaiwo mapoinzi ekupesana uko vashandisi vanotsauka kubva pane hunhu hunodiwa kana kufamba kure nechigadzirwa zvachose. Iyo Multipath Vatengi Rwendo zvakare inobvumidza iyo kambani kuona ayo akakosha sosi yekukwezva kwevatengi, kutyora yega yega zvikamu zveiyo faneli kuenzanisa yakafanana yevatengi nzendo. Zvikwata zvinokwanisa kuyananisa zvigadzirwa zvemigwagwa kuti zvigadzirise matambudziko neruzivo rwevashandisi uye vovavarira kudzokorora mhedzisiro yevakakodzera vatengi.
Nhanho 3: Drill Yakadzika NeMapoka Uye Maprofiles
Paunenge uchinge waongorora nzira dzinoshandiswa nevashandisi nezvigadzirwa zvako, rako rekushambadzira timu rinogona kutora danidziro pamishandirapamwe inotarisana nevaya vatengi vangangove nehurefu hwehupenyu hwese. Chinongedzo chinokutendera iwe kusevha vashandisi neinenge chero chinongedzo chingafungidzirika kuburikidza nekuvandudzwa kwehunhu hwehukama. Unogona kuwana:
Vashandisi vanogashira email yavo yekutanga kushambadzira nemusi weMuvhuro mangwanani vanonyanya kunyorera kupfuura avo vanogamuchira yavo yekutanga kutaurirana mumashure mevhiki.
Mahara ekuedza vatongi vanowanzo churn kunze kwekunge vakurudzirwa nechiyeuchidzo kutongwa kwavo kuri kupera zuva rinotevera.
Kana timu yako yekushambadzira ichida kuwana granular, Inoratidza inopa ma profiles evashandisi, ichivabvumidza kuti vawedzere iwo chaiwo man'a evatengi vakanyanya. Mukati meyako data yekuchengetera mune danda reese mushandisi chiito. Maprofiles evashandisi muKuratidzira anokuendesa kuburikidza nerwendo rwese rwevatengi, kubva pekutanga kubaya kusvika kune achangopfuura. Zvimiro zvetsika uye macohort anosimudza iyo bha yekushambadzira kwemunhu.
Iko kune goridhe rakavanzwa mukati meimba yako yekuchengetera, uye kuratidza kunobatsira iwe kuchera icho. Iwe haudi ruzivo rekodhi kana kukoshesa dhata yezvivakwa kuti uwane anobatsira ekuongorora maonero. Zvese zvaunoda idhizaini dhizaini yekuratidzira uye kuwana kune yako mushandisi dhata.
Edza iyo Inoratidza Demo
Tags: bidhidhi datachurntsika cohortskutenga vatengimutengi analyticsmutengi churnrwendo rwevatengikuchengetwa kwevatengichikamu chevatengichiratidzomultipath rwendo rwevatengimultipath faneraprofiles
WordPress: Gadzira Sidebars otomatiki Kune Chero Chikamu